Info | Wepozt
The consignor shall completely state name , phone number and address of the addressee.
Wepozt Delivery will not transport absolutely the items against the existing law .
Wepozt Delivery will not transport hazardous things , inflammable things, restricted drugs, ornament, severe explosives, lethal poisons , platinum , Precious gems, metals , stamps, stolen properties , remittances, traveller’s cheques ,public secret documents, antiques , paintings and live animals.
Wepozt Delivery will not undertake for item not exactly stated by customer.
Wepozt Delivery will not undertake for the items against the law at any township.
If there is legal proceeding due to illegal items , the consignor has agreed that Wepozt is exempted.
The maximum amount of compensation for damage or loss of parcel is 200,000 MMK (Kyats Two Lakhs)and if original value of the item is less than 200,000 MMK, it will be compensated as to the original value. Inclusion of effect value and added value in to the original value will not be accepted.
There is an insurance to be applied for those items or above 200,000 MMK. If insured parcel caused damage or loss , compensation may be observed as per insurance conditions. Addition of effect value & added value to the original value will not be accepted.
Insurable parcel and conditions for compensation have been already state in detail.
For loss and damage to the parcels which unable to state value exactly, 10 times of delivery cost will have to be paid as compensation.
Wepozt Delivery will not undertake to settle for loss of parcel delivered and damage caused by natural disaster in other way during the period which is not undertaken by Wepozt Delivery.
The consignor has to carefully pack if there is fragile stuff and is responsible to notify Wepozt Delivery . Wepozt Delivery will paste fragile on the item but the damage occurred on the way will not be undertaken.
The consignor will be allowed to store the parcel up to (72) hours only beyond the period prescribed by Wepozt Delivery and store charges shall further be paid for storage beyond prescribed period.
Storage will be accepted up to only (14) days on any reason but the parcel beyond the prescribed the period will be returned to the consignor.
The consignor must comply with the laws of those places for shipping goods overseas and across borders. Wepozt Delivery shall not be liable for cases arising from non-compliance with the law.
The facts mentioned above are understood well and accepted by the consignor.
Terms & Conditions (Mm)
၁။ ပစ္စည်းပေးပို့ရန်အပ်နှံသူသည် ပေးပို့ရမည့်သူ၏ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ လိပ်စာအားပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၂။ Wepozt Delivery လုပ်ငန်းမှ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်မလွတ်ကင်းသည့် ပစ္စည်းများအား လုံးဝ (လုံးဝ) ပို့ဆောင်မပေးပါ။
၃။ Wepozt Delivery သည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းများ ၊ ပေါက်ကွဲမီးလောင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းများ၊တားမြစ်ဆေးဝါးများ ၊ ရွှေထည် ငွေထည် ၊ ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများ ၊သေစေသောအဆိပ်များ ၊ ချက်လက်မှတ်များ ၊ အများနှင့် သက်ဆိုင် သော လျှို့ဝှက်စာတမ်းများ ၊ပန်းချီကားများ ၊ သက်ရှိတိရစာ္ဆန်များအားပို့ဆောင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ တိကျစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Wepozt Delivery မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ မည်သည့်မြို့နယ်တွင်မဆို တရားဥပဒေနှင့်မလွတ်ကင်းသည့်ပစ္စည်းများအား Wepozt Delivery မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၆။ တရားမဝင်သော ပစ္စည်းများကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရခြင်း တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက Wepozt မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်ကို ပေးပို့သူမှ သဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။
၇။ ပစ္စည်းများ ပျက်စီး ၊ ပျောက်ဆုံးမူအတွက် လျော်ကြေးငွေ၏ အများဆုံး သတ်မှတ်ချက်မှာ နှစ်သိန်းကျပ် (၂၀၀,၀၀ဝိ/-) ဖြစ်ပြီး ၊ ပစ္စည်း၏ မူလတန်ဖိုးမှာ နှစ်သိန်းကျပ်ထက် လျော့နည်းနေပါက မူလတန်ဖိုးအတိုင်းသာ ပေးလျှော်ပါမည်။ အကျိုးဆက်တန်ဖိုးနှင့် ထပ်ဆင့်အနာဂတ်တန်ဖိုးများကို မူလတန်ဖိုးတွင် ထည့်သွင်းခြင်းလက်မခံပါ။
၈။ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းအတွက် အာမခံဝယ်ယူထားနိုင်ပါသည်။ အာမခံဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းအတွက် ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးမှု့ရှိပါက အာမခံစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လျှော်ကြေးငွေခံစားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်တန်ဖိုးနှင့်ထပ်ဆင့် အနာဂတ် တန်ဖိုးများကို မူလတန်ဖိုးတွင် ထည့်သွင်းခြင်းလက်မခံပါ။
၉။ အာမခံ၀ယ်ယူခြင်းတွင် အာမခံနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် လျှော်ကြေးသတ်မှတ်ချက် စည်းကမ်းချက်များအား အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးအား တိကျစွာဖော်ြေပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ပစ္စည်းများ ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် ပစ္စည်းပို့ခ၏ (၁၀)ဆအား လျှော်ကြေးငွေအဖြစ် ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ Wepozt Delivery မှ တာဝန်ယူမှု့မရှိတော့သည့် ကာလအတွင်း တနည်းအားဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပြီးသော ပစ္စည်းများအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု့နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု့များအတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၁၂။ ပစ္စည်းပေးပို့ရန်အပ်နှံသူသည် ကွဲအက်စေတတ်သော ပစ္စည်းများပါရှိပါက သေချာစွာ ထုတ်ပိုးပေးရန်နှင့် Wepozt Delivery အားအကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ Wepozt Delivery သည် ကွဲအက်စေသည် အညွှန်စာအား ပစ္စည်းပေါ်တွင်ကပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လမ်းခရီးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု့အတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၁၃။ ပစ္စည်းပေးပို့ရန်အပ်နှံသူသည် ပေးပို့ရမည့်ပစ္စည်းအား Wepozt Delivery မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ပို့ရန်ကြာချိန်ထက် ပိုမိုကျော် လွန်၍ ( ၇၂ ) နာရီအထိသာ သိမ်ဆည်းထားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် Store Charge ထပ်မံ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ မည့်သည့်သောအကြောင်းဖြင့်မဆို Store သိမ်းဆည်းခြင်းကို ၁၄ ရက်အထိသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျော်လွန် ပစ္စည်းများအား ပစ္စည်းအပ်နှံသူထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၅။ ပစ္စည်းအပ်နှံသူသည် ပြည်ပနှင့် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ပစ္စည်းများ မှာယူခြင်း သို့ ပေးပို့ခြင်းများအတွက် ပြည်ပနှင့် နယ်စပ် များမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများကို အပြည့်အဝ လိုက်နာရမည့်ဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှု့ ပျက်ကွက်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်
ပေါ်လာသော မည်သို့သော ကိစ္စရပ်များကိုမှ Wepozt Delivery မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
၁၆။ ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအား ပစ္စည်းပေးပို့ရန်အပ်နှံသူသည် သိရှိနားလည်လက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။
Insurance Rules (Eng)
The parcel to be insured on paying premium shall complied with the following facts-
The parcel shall not be the parcel mentioned in the Term & Conditions of Wepozt Delivery.
The value shall be minimum 200,000 MMK (in word Kyats Two Lakhs Only) to maximum 1,000,000 MMk ( in word Kyats Ten Lakhs Only).
The parcel may exactly be stated the value.
The insurance will be covered for lost of parcel deliver to send and damage at the visible place. Damage and discrepancy of internal of parcel is not included in.
Damage to the parcel due to negligence of the consignor and inspection made at related bus stops, revenue offices and authorities will not be undertaken.
In case of loss or damage to the insured parcel, it will be paid as to the amount lost and it will be paid for repair only ( not exceeding the specified compensation ) for damage to repairable parcels.
Claims for the loss or damage of the insured parcel must be accompanied by the proof of specific parcel description.
Failure to provide specific proof of claim for damages, insurance will become null and void and it shall have to observe insured amount and compensation as per Term & Conditions of Wepozt Delivery.
Processing will be made to enable to compensate the insurance within 14 days, the compensation will be paid after certain
Compensation is based on the original value of parcel and addition of effect value and added value to the original value will not be accepted.
Insurance Rules (Mm)
၁။ အာမခံကြေးပေးသွင်း၍ အာမခံထားရှိမည့် ပစ္စည်းများသည် အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
က။ Wepozt Delivery ၏ Terms & Conditions တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပေးပို့ခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများ မဖြစ်စေရပါ။
ခ။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးသည် အနိမ့်ဆုံး ငွေကျပ် ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် (စာဖြင့် နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ) မှ အမြင့်ဆုံး ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ ( စာဖြင့် ဆယ်သိန်းကျပ်တိတိ)တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။
ဂ။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးသတ်မှက်ချက် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။
၂။ ပေးပို့ရန်အပ်နှံထားသည့် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှု့နှင့် မျက်မြင်နေရာ ပျက်စီးမှု့များသာ အာမခံတွင် အကျုံး၀်ငမည်ဖြစ်သည်။ Parcel အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းအခြေအနေများ ပျက်စီးမှု့နှင့် ကွဲလွဲမှု့များသည် အာမခံထားရှိခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၃။ ပစ္စည်းအပ်နှံသူ၏ ပေါ့ဆမှု့ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်များ၊ အခွန်ရုံးများနှင့် တာ၀်နရှိရုံးများတွင် စစ်ဆေးခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု့များကို တာ၀်နယူမည် မဟုတ်ပါ။
၄။ အာမခံကြေးပေးသွင်းထားသည့် ပစ္စည်းအတွက် ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးမှု့ရှိပါက ပျောက်ဆုံးသွားသော ပမာဏအတိုင်း ပေးလျှော်မည်ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်၍ရသော ပစ္စည်းများ၏ ပျက်စီးခြင်းအတွက် ( သတ်မှတ်လျှော်ကြေးထက် မပိုသော) ပြုပြင်စရိတ်ကိုသာ ပေးလျှော်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အာမခံကြေးပေးသွင်းထားသည့် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံး၊ပျက်စီးခြင်းအတွက် လျှော်ကြေးတောင်းခံရာတွင် ပစ္စည်းတန်ဖိုး ဖော်ပြချက် တိကျစွာ ပါရှိသော အထောက်အထားအား ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ လျှော်ကြေးငွေတောင်းခံခြင်းအတွက် တိကျသော အထောက်အထားများ ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါက အာမခံထားရှိမှု့ ပျက်ပျယ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မူလပေးသွင်းထားသည့် အာမခံငွေကြေးနှင့် Wepozt Delivery ၏ Terms & Conditions အတိုင်းသာ လျှော်ကြေးငွေ ခံစားခွင့်ရှိပါမည်။
၇။ အာမခံကြေးပေးလျှော်မှု့အား (၁၄)ရက်အတွင်း ပေးလျှော်နိုင်ရန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးအတည် ပြုပြီးမှသာ လျှော်ကြေးငွေအား ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ အာမခံလျှော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်းသည် ပစ္စည်း၏ မူလတန်ဖိုးအတိုင်းသာဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်တန်ဖိုးနှင့် ထပ်ဆင့်အနာဂတ် တန်ဖိုးများကို တန်ဖိုးတွင် ထည့်သွင်းခြင်းအား လက်မခံပါ။
S (20/21), U Chit Maung Housing,
U Chit Maung Street,
(+95) 1554064 | (+95) 1554065
© Wepozt 2020. All Rights Reserved. | Designed by TESS Technology